कालापानी,लिपियाधुरा र लिपुलेक - Rubas News
सोमबार, असोज ४ २०७८०५:३३
विगत ७० वर्ष देखि चल्दै आएको नेपाल भारत सीमा विवादको अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन । जब कालापानी र लिपुलेकको विवादको कुरा आउछ । भारतिय सीमा सुरक्षा बल एस एस बी ले त्यहाका स्थायीहरु लाई निकै दुःख दिने गरेको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको अहिले नभएर सन १९६२ तिर भारत चिन युद्ध हुदा भारतिय सेनाले यस क्षेत्रमा प्रबेश गरेको थियो तर त्यो बेलामा अस्थाईरुपमा बसोवास गर्ने तत्कालिन पश्चिमका जरनल रिषिकेश साहाले राजा महेन्द्रलाई भारतिय सेना बसेको जानकारि गराएका थिए । र राजा महेन्द्रले अस्थाईरुपमा बसेबस्नुहोस नत्र अनुमति छैन भन्नेकुरा गरेको जानकारि पाएका छौ । र हालै भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारिज गरेर पाकिस्तान तिर जम्बु कस्मीर खोसेसंगै आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जस्मा नेपालको कालापानी , लिम्पीया धुरा र लिपुलेक क्षेत्र राख्दै आफ्नो हो भनि प्रमाणित गर्न खोजिएको छ ।
जुन नक्सा जनताले देखेपछि चरम विवादको अंग बनेको हो । सन १९१६ भन्दा अगाडि कुमाउ गडवाल पनि नेपालकै थियो, सुगौलि सन्धि पछि नेपालको सीमा खुम्चिएर महाकालि सम्म आइपुगेको छ । कालापानी क्षेत्रका सबै गाउहरु नेपालकै भएको विश्व गुगोलमा पनि प्रष्ट हेर्न सकिन्छ । २०१९ सालमा दार्चुला बैतडि र डोटि डडेल्धुरा एउटै भएको बेला कालापानी क्षेत्र भित्र पर्ने कुटि,गुन्जी र नाबी गाउँका बासिन्दाहरुले नेपालको बैतडि जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा आफ्नो तिरो तिरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
नेपालि सेनाबल प्रहरी तथा शसत्र को अस्थाई पोष्ट पनि बस्ने व्यवस्था नभएको अतिक्रमित क्षेत्र कालापानीमा भरतले स्थाई क्यम्प नै बनाएर २४ घण्टा नै भारतिय सेना बस्ने मजबुत व्यवस्था मिलाएको छ । भारतले धार्चुला हुदै चिनको सीमा लिपु पास सम्म १४ कि. मि. लम्वाईको सडक निर्माण गरिरहेको छ । जसमा २७ कि. मि नेपाली भुभाग नै पर्ने गर्दछ । नेपालिले नेपाल तर्फ गरेको सडक निर्माण कार्य दार्चूलामा सजिलो देखिन्छ ।
देशको सीमा यसरि पटक पटक अतिक्रमण भैरहनुमा सरकारि पक्षको निकै ठुलो कमजोरि रहेको जनताको भनाइ रहेको छ । सीमा सुरक्षाकर्मिको उपस्थिती नहुनु र विकास निर्माण मुख्य गरि बाटो घाँटो निर्माणमा ध्यान नदिनु सक्नु सरकारको कमजोरि पक्ष हो । भारतले सजिलै सडक सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा क्याम्पहरुको व्यवस्था गर्दै आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी राखेर सार्वजनिक गरिसके पछाडि नेपाल सरकारले छिटो नै समज्दारी देखाउदै आफ्नो सीमा आफैसंग रहने दाबिका साथ भारत संग पहल गर्नुपर्दछ ।